Daily Soft Natural Milk Soap (Buy2Get 1)
အသားအရည်စိုပြေစေသည်။နူးညံ့ချောမွေ့စေသည်။နေလောင်ဒဏ်ကို အပြည့်အ၀ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ဈေးသက်သာပါသည်။အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည်။ Chemical လုံးဝထည့်မထားသော သဘာ၀ နို့နံ့လေးပါ Face & Body နှစ်မျိူးလုံး အသုံးပြုန..
Easy White Armpits Cream (Buy2Get 1)
Moisturizers + Collagen ပါဝင်သောကြာင့် အမည်းစက်များ အကြောပြတ်ရာ အသားမာတက်ပီး မည်းနေသောနေရာများကို ပုံမှန်လိမ်းပေးရုံနှင့် သက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။ ဂျိူင်း၊ဂုတ်၊ဒူးခေါင်း၊တံတောင်ဆစ်မဲခြင်း၊ပေါင်ကြား၊တင..
Good Day Facial Soap (Buy2Get 1)
အသားအရည်ခြောက်သူများအတွက် အထူးသီးသန့် အသားဖြူဆပ်ပြာလေး ဖြစ်ပါသည်။နို့နှင့်မုရောစပါးသည် အသားအရည်ကို ပြန်လည်အားဖြည့်ပေးသောကြောင့် အရွယ်တင် တင်းရင်း နုပျိူစေပါသည်။..
Lady in Love Body Lotion (Buy2Get 1)
ပန်းရနံ့သင်းသင်းလေးနဲ့ တစ်နေကုန်မွှေးလို့ အသားအရေကို စိုပြေစေပါသည်။သဘာဝအတိုင်း ကြည်လင်ဖြူဖွေးစေသည်။SPF မပါလို့ နေ့ရောညရော အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ရေမွှေးစွတ်စရာ မလိုအောင် ကိုယ်သင်းရနံ့လေး သင်းပျံ့စေပါသည်။..
So Fresh Overnight Mask (Buy2Get 1)
About The Product Socute So Fresh Overnight Mask is white cream.Soft and easy to absorb. Not greasy.Not stained with pillow.It solves acne problem, reduce acne, inflamed acne, rashes, acne, clogged.I..
Vitamin Serum (Buy2Get 1)
အောက်ခံအနေနှင့်လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် မိတ်ကပ်သားညီစေပီး ပိုမိုကြာရှည်ခံအောင် စွမ်းဆောင်ပေးပါသည်။ ဝက်ခြံ၊အမည်းစက်၊အမာရွက်တွေကိုလည်း ပျောက်ကင်းစေပါသည်။ Chemical Free မလို့ System Breakout ဖြစ်နေချိန်ပါ လိ..
White Body Lotion (Buy2Get 1)
အသားအရည်စိုပြေစေသည်။နူးညံ့ချောမွေ့စေသည်။SPF 50 pa+++ ပါဝင်လို့ နေလောင်ဒဏ်ကို အပြည့်အ၀ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ဈေးသက်သာပါသည်။အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည်။..
© Copyright Crane Cross Company Limited 2019. All Rights Reserved.